Ny maha-zava-dehibe ny fananana toerana manokana amin'ny mpivady | Bezzia
Ny maha-zava-dehibe ny fananana toerana manokana ao amin'ny mpivady
Maria Jose Roldan | 07/07/2021 22:00 | fifandraisana
Ny fananana vady dia tsy midika hoe mandany 24 ora isan'andro miaraka amin'ny olon-tianao. Amin'ny fotoana maro, ny fandaniana fotoana be dia be miaraka dia mety hampihena ny fifandraisana ary hametraka izany amin'ny loza mitatao. Tao anatin'ny fifandraisana, tsirairay dia tsy maintsy manana ny toerana manokana ary koa ny firaisana ara-nofo sasany. Tsy zavatra ratsy indraindray ny mandeha miaraka amin'ny namana hisotro zava-pisotro na mandeha miantsena tsy misy mpiara-miasa.
Ny zava-misy fa manana fotoana kely ho an'ny tenanao ianao, hamela ny fatorana hanjary hatanjaka kokoa sy hitombo ny kalitaon'ny fifandraisana. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka momba ny maha-zava-dehibe ho an'ny mpivady ny tenany mba hahafahany mankafy tsiambaratelo ary hanana toerana manokana manokana isan'andro.
1 Ahoana ny fomba hahatonga ny olon-tianao hihatsara sy hatanjaka kokoa
2 Ny habaka manokana ao amin'ny mpivady
Ahoana ny fomba hahatonga ny olon-tianao hihatsara sy hatanjaka kokoa
Amin'ny mpivady rehetra, ny olona roa dia tokony hanana fotoana manokana sy akaiky izany dia manampy amin'ny fampiroboroboana ny fifandraisana. Tanteraka izany amin'ny alàlan'ny fanarahana torolàlana na torohevitra omena anao avy hatrany:
Ny toeran'ny mpivady dia tsy maintsy hajaina amin'ny fotoana rehetra fa tsy hanafika. Na dia toa mifanohitra amin'izay aza ny fahitana azy, ny fahafahany mandositra minitra vitsy na ora vitsivitsy amin'ny fiarahana dia manampy azy hatanjaka kokoa.
Ny fahalalahana ao anatin'ny fifandraisana rehetra dia fanalahidy ary ilaina mba handehanany tanteraka. Fanakanana ny mpiara-miasa ary mandrara azy tsy hanao zavatra sasany, Hanimba ny fifandraisana fotsiny izy io ary hanala azy tsikelikely.
Ny mpivady dia tsy maintsy mahay mifampiresaka sy miresaka momba ny zava-drehetra nefa tsy takona afenina. Izany dia manampy ny olona roa hahatsapa ho azo antoka kokoa amin'ny fifandraisana, izay tsara ho azy. Raha misy tsy fifampiresahana tsara eo amin'izy roa dia azo atao ny manomboka mitombo ny tsy fahatokisana ary mihalefy amin'ny fomba mampidi-doza ny mpivady.
Ny fanaraha-maso dia tsy mety misy amin'ny karazana mpivady izay azo heverina ho salama. Ny olona mifehy dia manana tsy fahatokisan-tena tena mampiahiahy fa hamindra amin'ny mpiara-miasa. Ny fanaraha-maso dia hahatonga ny fifandraisana ho reraka kely na kely fotsiny ary miafara amin'ny fanapotehana rehefa mandeha ny fotoana.
Ny habaka manokana ao amin'ny mpivady
Ao anatin'ny mpivady, ny olona tsirairay dia tsy maintsy manana toerana manokana tsy afaka ary tsy tokony hotafihin'ny olona iray hafa. Ny fananana fahalalahana kely raha ny amin'ny fihaonana amin'ny namana na ny fanaovana zavatra sasany ivelan'ny mpivady dia mahatonga ny fifandraisana hampanankarena sy hikatsahana ny soa ho an'ny rehetra. Zava-dehibe ny hahatsapan'ireo mpikambana ao amin'ny mpivady fahasambarana sy faran'izay betsaka araka izay azo atao, mba hisy vokany tsara eo amin'ny fifandraisana izany.
Aza adino fa tsy tsara ny hoavin'ny mpivady raha hiara-handany ny ora tontolo andro izy ireo. Rehefa ela, io tsiambaratelo momba ny fahalalahana io dia miafara amin'ny fanimbana ny fifandraisana mihitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Ny maha-zava-dehibe ny fananana toerana manokana ao amin'ny mpivady
Bartolinitis, inona izany ary ahoana ny fomba hitsaboana azy
Tolo-kevitr'i Massimo Dutti ho an'ny andronao amoron-dranomasina